वैशाख २७ गते आइतबारको राशिफल जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
वैशाख २७ गते आइतबारको राशिफल
वि.सं. २०७२ वैशाख २७ गते आइतबार तदनुसार ई. सं. २०१५ मई १० तारिख,
किलक नामक संवत्सर, शाके :— १९३७, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, ने.सं. :— ११३५, (वछलागा)
इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:१४ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:३२ बजे
काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:२० बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:४२ बजे
पोखरा, कास्की, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:२५ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:४८ बजे
ज्येष्ठ कृष्णपक्षको षष्ठी तिथि, बिहान ०५:४८ बजेसम्म, त्यसपछि सप्तमी तिथि,
उत्तराषाढा नक्षत्र, दिउँसो ११:११ बजेसम्म, त्यसपछि श्रवण नक्षत्र, चन्द्रमा मकर राशिमा (अहोरात्र व्याप्त),
शुभ योग, दिउँसो ०१:४५ बजेसम्म, त्यसपछि शुक्ल योग,
बब करण, दिउँसो ०४:४६ बजेसम्म त्यसपछि बालब करण,
आनन्दादि योग : अमृत, चन्द्रवर्ण : कालो, चन्द्रदिशा : दक्षिण, योगिनीदिशा : पश्चिम, वारशूल : पश्चिम,
आजको व्रत÷पर्व : त्रिपुष्कर योग बिहान ५ बजेर ५६ मिनेटदेखि दिनको १० बजेर ५३ मिनेटसम्म,
२८ गते : अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा),
३० गते : अन्नप्राशन(पास्नी), चूडाकर्म(छेवर),
आम्दानीमा कमी आउने छ । पिताको स्वास्थ्यप्रति सचेत रहनुहोला । प्रतिस्पर्धीका कारण हुनै लागेको काम बिग्रन सक्छ । मनोरञ्जन वा खेलवाडका कारण तनाव सिर्जना हुनेछ । आलोचनाबाट बच्ने प्रयास गर्नुहोला । आजका लागि शुभअङ्क ७ र शुभरङ्ग नीलो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ मृत्युञ्जयाय नमः यस मन्त्रको कम्तीमा २३ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ । नजिकैको मित्र वा नातेदारले अपमानित तुल्याउन सक्छ । बोलीमा संयमता अपनाउनु होला, सामाजिक र परोपकारका मार्गमा अवरोध हुनेछ । तपाईंको परिश्रम खेर जान सक्छ । आजका लागि शुभअङ्क ९ र शुभरङ्ग छिर्केमिर्के बुट्टे हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ कें केतवे नमः यस मन्त्रको कम्तीमा ७ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
पाचन प्रणालीमा आएको खराबीले तपाईंलाई निराश तुल्याउन सक्छ । साँझपख मन भुलाउने उपायको प्राप्ति हुनेछ । पारिवारिक समस्यालाई हल गर्न तल्लीन हुनुपर्ने छ । बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा खिन्नता बढ्नेछ । आजका लागि शुभअङ्क ३ र शुभरङ्ग रातो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ गं गणपतये नमः यस मन्त्रको कम्तीमा २१ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
आर्थिक समस्या निराकरण गर्ने उपाय पत्ता लाग्नेछ । दिन चुनौती र परीक्षणका रूपमा देखा परेको छ । बन्दव्यापार र साझेदारीबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । हडबड र शीघ्रताले काम गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुन्छ । आजका लागि शुभअङ्क ५ र शुभरङ्ग बैजनी वा पहेंलो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ नमो भगवते वासुदेवाय यस मन्त्रको कम्तीमा ९ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
पाचनप्रणाली र नसासम्बद्ध रोगले दुःख दिन सक्छ । दृष्टिशक्तिमा कमी आउन सक्छ । व्यवहारिक समस्याले अवरोध हुने सम्भावना छ । बेलुकीपख मन आनन्दका लागि आकर्षित बन्नेछ र विलासिताका भावनाहरू जागृत हुनेछन् । आजका लागि शुभअङ्क २ र शुभरङ्ग सेतो वा घिउरङ्ग हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ नमः शिवाय यस मन्त्रको कम्तीमा २१ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
अनावश्यक र दिक्कलाग्दो यात्राको सम्भावना छ । व्यापारिक कारोबारमा कुनै नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुनेछ । भाइबहिनी र छोराछोरीले पनि तपाईंको भावनालाई लत्याउन सक्छन् । साथीभाइ टाढिने सम्भावना छ । आजका लागि शुभअङ्क ९ र शुभरङ्ग गाढा रातो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ नमश्चण्डिकायै यस मन्त्रको कम्तीमा ९ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
घरायसी समस्याका कारण बेलुकाको बास घरबाहिर हुने सम्भावना समेत छ । घरायसी कामधन्दा र समस्याहरूमा केन्द्रित हुनाले आज फुर्सद निकाल्न सकिंदैन । सामाजिक र परोपकारका मार्गमा अवरोध हुनेछ । आजका लागि शुभअङ्क ९ र शुभरङ्ग हलुका रातो वा पहेंलो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रको कम्तीमा १९ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
घरायसी सुखमा कमी देखिन्छ । तपार्इंको व्यक्तिगत दृष्टिकोण उल्टो हुने देखिन्छ । सामाजिक र परोपकारका मार्गमा अवरोध हुनेछ । नजिकैका मित्रले समेत तपाईंको भावनालाई बुझ्न सक्दैनन् । विभिन्न समस्याहरू झेल्ने समय छ । आजका लागि शुभअङ्क ६ र शुभरङ्ग सेतो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ गुरवे नमः यस मन्त्रको कम्तीमा २४ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
पेसा वा व्यवसायमा नचाहेको जिम्मेबारी थपिन सक्छ, प्रतिष्ठामा कमी भएको महसूस हुनेछ । आज चिताए जति फाइदा हुनसक्दैन, परिश्रम निरर्थक हुनसक्छ । नातागोता र छरछिमेकीका किचलोमा समावेश हुनुपर्ने सम्भावना छ । आजका लागि शुभअङ्क ४ र शुभरङ्ग पहेंलो वा गुलाबी हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ महालक्ष्म्यै नमः यस मन्त्रको कम्तीमा ९ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
धेरै दिनपछि बिगतमा भएका कमीकमजोरीको मूल्याङ्कन गर्न जाँगर चल्नेछ । जीवनसाथी र बालबच्चालाई समय दिनु राम्रो हुन्छ । आफ्ना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र चाहनालाई थाती राखेर अर्काका लागि काम गर्नु राम्रो हुन्छ । आजका लागि शुभअङ्क ३ र शुभरङ्ग गुलाबी हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ अं अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रको कम्तीमा १० पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
बन्दव्यापार र व्यवसायमा समय दिन सकिंदैन र सोचेबमोजिम काम नबन्न सक्छ । धैर्यले काम लिने समय छ । छर–छिमेकमा भने केही असमझदारी बढ्ने योग छ । प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्धामा पराजय ब्यहोर्नु पर्छ । आजका लागि शुभअङ्क ५ र शुभरङ्ग पहेंलो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ बृं बृहस्पतये नमः यस मन्त्रको कम्तीमा १९ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
विगतमा भएका राम्रा क्रियाकलापको स्मरण हुनेछ । आज मेवा मिष्टान्न परिकार मिल्नेछ, भेटघाट राम्रै होला । भाइबहिनीका तर्फबाट खुसीको खबर प्राप्त हुने सम्भावना समेत छ । राज्यपक्षबाट सम्मानित हुने अवसर पाइने छ । आजका लागि शुभअङ्क ७ र शुभरङ्ग कालो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ शं शनैश्चराय नमः यस मन्त्रको कम्तीमा २३ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।